काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरण अनुसार पण्डितसँग एभरेष्ट बैंकमा रहेको मुद्दती खातामा २५ लाख बैंक व्यालेन्स रहेको उल्लेख छ । त्यो रकम पैत्रिक भएको जनाईएको छ । त्यसैगरी मन्त्री पण्डितकी पत्नी विमला पण्डितसँग एभरेस्ट बैंक र कृषि विकास बैंकका मुद्दती खाता अन्तर्गत ३० लाख रहेको छ। उक्त सम्पति उनले स्वआर्जन, पैत्रिक तथा व्याजमार्फत आर्जन भएको जानाएका छन्।
अचल सम्पतितर्फ भने मन्त्री पण्डितसँग ४ विघा २ कठ्ठा जमिन रहेको उल्लेख छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार उनको जमिन पैतृक रुपमा आर्जन भएको भनी उल्लेख छ ।
त्यस्तै सगोलको ४ आना जग्गा ललितपुरको भैसेपाटीमा रहेको र पैत्रिक रुपमा प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री पण्डितले सम्पत्ति विवरणमा पत्नी विमला पण्डितसँग १० तोला सुन र १५ तोला चाँदी रहेको उल्लेख गरेका छन् जुन पैत्रिकरुपमा प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
साईकलप्रेमी समेत रहेका मन्त्री पण्डितले सम्पति विवरणमा सवारी साधन भन्ने शिर्षकमा एक थान पुरानो साइकल भनेर लेखेका छन् ।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०९, २०७५१५:५५
संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रदेशको राजधानी तोकिने
शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहबीच हुँदै प्रतिस्पर्धा!!!!
काङ्ग्र्रेसभित्रका राजा महाराजालाई नहटाएसम्म केहि हुँदैन भन्छन् यी नेता !
अाेलीकाे प्रधानमन्त्री सपथ ग्रहण संगै देउवालार्इ सिलवालले गरे यस्ताे कटाक्ष
अाेली नभएकाे बेला वामदेवको अध्यक्षतामा एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै, के छ एजेण्डा ?